Sheekh Dirir Oo Bulshada Usoo Jeediyay Sida Looga Badbaadi Karo Cudurka Coronavirus Ee Dunidu Ka Qaylisay Iyo Tallaabooyinka La Raacayo - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Arrimaha Diinta / Health & Education / Warar | By admin
Sheekh Dirir Oo Bulshada Usoo Jeediyay Sida Looga Badbaadi Karo Cudurka Coronavirus Ee Dunidu Ka Qaylisay Iyo Tallaabooyinka La Raacayo
Hargeysa(ANN)- Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir ayaa ka hadlay Cudurka dunuda ku faafaya ee Coronavirus, kaas oo si weyn looga qayliyay, wuxuuna sheegay in Aduunyada waxa ku dhaca bani’aadamka yihiin laba qeybood, cuqubo oo kuwa caasiga ku dhaca, qeyb ixtixaan ah, oo dadka wanaagsan Ilaahay SW dembiga kaga rido.
Sheekh Dirir, waxa uu Khudbadii Jimcaha kaga hadlay raadadka dunuubta macaasidu ku yeeshaan dalka iyo dadka, isagoo bulshada usoo jeediyay inay badiyaan Allah ka cabsiga si ay uga badbaadaan cadhooyinka Alle iyo cudurka Coronavirus iyo cudurada kaleba.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in Adoonku markuu deedafeeyo nimcooyinka Ilaahay SW ku mannaystay, abaalbarintiisa Aduunka lagu tuso intaan la gaadhin aakhiro, “Adoonku abuuray, ee arsaaqad iyo Aduun isu raaciyey, ee edebdaradan kala horyimi, ee yidhi maba jirtid? Oo nimcadii Ilaahay SW diiday oo dafiray? In waxyaalo badan aduunka lagu tuso way istaahilaan kuwa sidaa samaynaya? Iyadoo weliba naxariista Ilaahay SW ee balaadhan, weli fursad loo siinayo inay soo noqdaan.”Cadaabka weyn ee aakhiro intaan la gaadhin, kuwo yaryar ayaa dhadhansiinaynaa, si ay u soo noqdaan.
Nebi Maxamed NNKH, waxuu xadiis saxeex ah inoogu sheegay cudurada Aduunka ka dhacaya yihiin ciqaab Illaahay SW, kaga jawaabayo caasinnimada adoomihiisu la yimaadaan, “Muhaajiriinaay, shan arrimood marka la idiinku sallido, Ilaahay SW ayaan ka magan galay inuu idiinku sallidee, waxay noqonayaan jawaabahoodu sida soo socda
Hadday sakada bixin waayaan, Illaahay SW nimcadiisa roobka ayuu ka hakiyaa, oo ka joojiyaa
Haddii dadku ballanka Illaahay SW iyo rasuulkiisa CS jebiyaan, kii madaxda ahaa been sheego, kii taajirka ahaa been sheego, cadow ayaa Illaahay SW ku sallidaa, ka qaada aduunyada Illaahay iyo Rasuulkiisa u seegeen.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in arrinkaa meel fog innagoo aan gaadhin, waaqiceena ayey ka muuqanaysaa, saxida la saxaana waxaynu ku helaynaa barwaaqada Nebi Maxamed NNKH inoo sheegay.
Waxa isweydiin leh cudrada iyo masiibooyinka aduunka ka dhaca, keliya kuma dhacaan kuwa caasiyiinta ah, balse dad badan oo Illaahay SW adeeca, maati, caruur aan waxba geysan ayey ku dhacaan sidoo kale, xaggee iyagana laga raacay?
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in haddii daacada illaahay iyo ka amar qaadashadiisa la badiyo in qofku wanaag Aduunyo iyo mid Aakhiraba ku helayno, sida aayad quraanka la innoogu sheegay “Ddaku hadday dariiqa fiican ku toosnaan lahaayeen, raxmaadku kama kala go’een”.
Xaalka walaalayaal waynu arkaynaa, inaynu Ilaahay SW iska dhaadhicino maaha, qof walba naftiisa xog-ogaal ayuu u yahay, mujtamaceena dhibka jira waynu ognahay, xalku waxa weeye inaynu Illaahay SW u toobad keeno, Ilaahay SW ayaa yidhi, “Ilaahay u toobad keena, toobad wanaagsan, Ilaahay dunuubtiina wuu idiinka dhaafi”
Sheekh Maxamed Cumar Dirir oo bulshada uga digayey Cudurka Coronavirus ee dunida ku faafaya iyo sida la isaga ilaalin karo. wuxuu yidhi, “Ta koowaad waa tii Illaahay SW inna faray ee nadaafada, markaa waa innaynu aad u badino weysada? Weysadu waxay ka mid tahay waxyaalaha ka hortaga ugu wanaagsan ee cudurada lagaga hortago. Dhakhaatiirta casrigan waxay ogaadeen in weysadu qeyb weyn ka qaadato ka hortaga cudurada.
Qofku markuu hindhisayo waa inuu ku dedaalo inuu marro ama waxyaalaha Afka lagu daboolo isticmaalo. Nebigu NNKH wuu inna baray “Midkiin haduu candhuuf tufayo maradiisa ha ku tufo”
Marka xamaamka laga soo baxo ama wax la cunayo in la faraxasho, taasoo Nebigu NNKH inoo jideeyey, markuu xamaamka ka soo abxo ciida ayuu faraha gelin jiray, si ay ummada tusaale ugu noqoto. Waa in dhaqankaa caruurta la barro, ehelka, gabdhaha shaaqiyadaha la barro, cudurada wareega waxyaalaha Ilaahay SW ku ilaaliyo (Ilaahay baa ilaaliyee) waxa ka mid ah nadaafada.
Haddii Qofku gacantiisa mariyo meel aan munaasib ahayn, inuu meelaha jidhkiisa daldaloola Afka, sanka, indhaha aanu marmarin.
Qofku haduu is-dareemo inuu xanuunsanayo waa inuu goobaha caafimaadka si degdeg ah ula xidhiidho.